ikhaya ISIQINISEKISO SE-CLASSIC FOOTBALLER I-Ricardo Kaka Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo leGosa lebhola leBhola eliyaziwa kakhulu ngeSiqheno; "Kaka". Indaba yethu yeRicardo Kaka yobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts ikuzisa i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela kwixesha lakhe lokuzalwa. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubuhlobo bentsapho, ubomi bentsapho kunye neeninzi ezininzi eziziwayo.
Ewe, wonke umntu uyazi ngamakhono akhe kodwa abambalwa bacinga ukuba uRicardo Kaka Biography enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokunye okunye, masiqale.
I-Ricardo Kaka Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts -Obomi bakwangoko
URicardo Izecson dos Santos Leite AKA 'Kaka' wazalwa ngomhla we-22nd ngo-Ephreli 1982 eBrasília, District District, eBrazil.
Wazalelwa kunina, uSimone dos Santos (owayengumfundisi weziko lokuqala) kunye noBosco Izecson uPereira Leite (unjiniyela wezobugcisa asele phantsi).
Wayenokukhuliswa ngokukhuselekileyo kwemali okwamvumela ukuba agxilise kuzo zombini nebhola ngexesha elifanayo. Xa wayeseneminyaka esixhenxe, intsapho kaKagá yafudukela kuyo São Paulo.
Njengabaninzi ngaphambi kwakhe, uKaka wafumana kwinqanaba lebhola elalilibathandayo. Isikolo sakhe saqala ukufumanisa italente yakhe kwaye samlungiselela eklasini yolutsha lendawo "Alphaville,".
Ixesha likaRicardo Kaka Boyhood
U-Kaka wenza iqela lakhe lifanele ukufumana ukugqibela kumqhudelwano wabo wasekhaya. Oku kwenza ukuba aphinde ahlolwe ngumbutho wekhaya São Paulo FC, owamnika indawo kwiziko le-youth. Bonke abanye, njengoko bethetha, ngoku iimbali.
I-Ricardo Kaka Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts -Ulwalamano lobomi
U-Kaka wadibana nobumnandi bakhe uCaroline xa wayengu 15 kwaye wayengu 20 ngelo xesha.
Oku kwenzeka kwi-2002, ngelixa wayesesesikolweni Brazil. Baye bathandana ngokunyanisekileyo omnye nomnye. Nokuba umgama (ngamawaka eekhilomitha) awukwazi ukuwahlula. Bobabini baqalisa ubudlelwane babo obukhulu ngexesha elaseKará liza kudlala AC Milan. Ngoxa wayesekho, uCelilico wajoyina ibandla likaKaka Brazil kwaye kamva waba ngumfundisi, yonke into ngenxa yothando lwakhe lobuKristu.
Inene, uCaroline unhle kakhulu, uthembekileyo kwaye ungumKristu ozinikeleyo. U-Kaka udume ngokukhawuleza ukuba bobabini bezintombi ngaphambi kokumcebisa kuye.
Batshata ngomhla we-23rd kaDisemba 2005 kwi-Rebirth ethandwayo kwiCawa likaKristu eSão Paulo.
Esi sibini sinabantwana ababini: unyana Luca Celico Leite (owazalwa 10 Juni 2008) kunye intombi ka-Isabella (owazalwa ngo-23 ngo-Ephreli 2011). Bobabini basondelene noyise njengoko kuboniswe ngezantsi.
Kaka kunye nezingane zakhe
I-Ricardo Kaka Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts -Indaba yoTshabano
Ku-2015, Kaká noCelico babhengeze ngokuqhawula umtshato ngokusebenzisa i-media media. Ngamazwi akhe ..."Sithanda ukwenza uluntu ukuba, emva kweminyaka engithoba, sivumelane ngokuqhawula umtshato. Umtshato wethu usinike abantwana ababini abathandekayo esibathandayo. Ngokubaluleka kokubaluleka maqhina, siza kuqhubeka sinalo, inhlonipho, ukubulela, kunye nokwazisa omnye komnye kuya kuhlala kuhlangene. Siyacela ukuba uvelwano kunye nokuqonda kwakho ukugcina ubumfihlo bethu kumzuzu wokutshintsha. "
U-Ex-wakhe umfazi uCelico wabonakalisa ... "Xa umntu ekopela, kuyimpawu yokuba umfazi wakhe wehlulekile." Amazwi akhe anika abalandeli bakaKaka ingcaciso malunga nokobangela ukuba baqhawule umtshato kunye nokuba kutheni baqhawule umtshato.
UCaroline uyibona indlela yokuqhawula umtshato wakhe
Ngo-24 Disemba 2016, uKaka waqinisekisa ukuba uthanda umzekelo waseBrazil u-Carolina Dias kumyalezo kubalandeli bakhe be-9.8million kwi-Instagram.
Ubu bungqina bokuthi uKaka uqhubeke
Aba babini baya kumtshato kaLucas Moura eSao Paulo.
Kwakhona emva kwe2016 emva kweenyanga zokucinga, uCaroline Celico waqinisekisa ngokusesikweni ukuba ulwalamano nomninimzi waseBrazil uEduardo Scarpa. U-Kaka wayevuyisiwe xa ebona isithombe somfazi wakhe wangaphambili kunye nenani elinye intshaba. U-Eduardo ubonakala enyamekela kakhulu uthando lwakhe olutsha.
Ubu bungqina bokuthi uCaroline Celico waqhubeka
I-Ricardo Kaka Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts -Ubomi Bentsapho
UTATA: Ubaba kaKaka, uBosco Izecson uPereira Leite ngumyinge woluntu osele phantsi umhlalaphantsi wesikolo esisezantsi. Wayeqinisekisa ukuba oonyana bakhe ababini (uKaka noDigão) bafumana ukukhuliswa kakuhle. Babengazange bakhuliswe ekuhluphekeni. Wabanika imfundo elungileyo nethuba lokukhetha nokuphila amaphupha abo emisebenzi. Ngezantsi nguBosco Izecson uPereira Leite kunye nendodana yakhe yokuqala, i-Little Kaka.
UBosco Izecson uPereira Leite kunye neKaka encinane
UMAMA: Umama kaKaka; USimone dos Santos ungumfundisi wesikolo esikolweni esethathe umhlalaphantsi owakha ukwakha phakathi kwakhe, uKaka kunye nentsapho yakhe yonke. Ukuba ngumfundisi wesikolo samabanga asemgangathweni wamenza ukuba aqonde kakuhle intsapho yakhe. USimone dos Santos ulandelelwano lukaKaka noThixo. Bobabini basondelene kakhulu njengoko kuboniswe kumfanekiso apha ngezantsi.
UKaka noMam Simone dos Santos
UBHUTI: U Rodrigo Manuel Izecson dos Santos Leite (owazalwa ngo-14 Oktobha 1985), owaziwa njengeGigão, Brazilian umdlali webhola oqeqeshe umhlalaphantsi kunye nomzalwana kuphela waseKaka. Wadlala njengomkhuseli ophakathi kwimihla yakhe yomsebenzi.
As Ingxelo yeBleachers Ubeka, i-Digão iphakathi kwoluhlu lwabazalwana abaphezulu be-10 bebhola e-football abangayenzanga kwimisebenzi yabo. Digão idlala AC Milan unyaka ngaphambi kokuba abuyele kwilizwekazi laseMerika ukuqhubeka nomsebenzi wakhe ongaphumeleli.
Kuze kube ngumhla, uthathwa njengomdlali onzima kakhulu kunokuba abeke unyawo kwiSerie A pitch. Ezinye iifesithi zithetha ngokuchasene ngqo (intshutshiso) Kaka ngazo zonke iindlela. Ngokukrakra, i-Digão idlala imidlalo ye-38 kwimisebenzi yakhe yonke ngaphandle kokufaka umgomo. Wayesethatha umhlala-phantsi esemncinci we-32 ebone ibhola ibingenayo ukubiza kwakhe.
Into elahlekileyo ekusebenzeni kwakhe yazuza kwimpilo yakhe yothando. Utshatile umtshato nguRebeca Sabino. U Kaká wayenguthixo womtshato.
I-Ricardo Kaka Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts -Ingozi yeZibalo
Ngeminyaka eyi-18, iKaká yaxhatshazwa ngumsebenzi kwaye mhlawumbi ikhubazekile-inciphisa i-spinal rupture ngenxa yengozi yokubhukuda.
Ngethamsanqa, wabuyela ngokuphinda. Ubonisa ukuba uyabuyisela kuThixo kwaye uye wabiza ingeniso yakhe kwingcawa yakhe.
I-Ricardo Kaka Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts -Imvelaphi yeSiteketiso
Umntakwabo omncinci uRodrigo (owaziwa ngokuba nguGigão) kunye nomzala wakhe uEduardo Delani nabo banomdlali bebhola.
UGigão wambiza "Ikhoka" ngenxa yokungakwazi kwakhe ukubiza "Ricardo" xa beselula. Ukungabikho kwamagama ekugqibeleni kwagqibeleni kwaguquka kwigama 'Kaká. Igama 'Kaka' ayinayo inguqulelo ethile yePortugal.
Ngezantsi umfanekiso weKaka kunye nomntakwabo xa bebantwana.
I-Little Kaka kunye neGigão
I-Ricardo Kaka Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts -Ukholo Lwabo
U-Kaká ungumKristu onguKristu ozinikeleyo owayengumalungu osebenzayo wokuzalwa kwe-São Paulo e-Christ Church.
Wayexakeka enkolweni eneminyaka eyi-12: "Ndafunda ukuba lukholo olwenza isigqibo sokuba into ethile iya kwenzeka okanye ayikho." uthi uKaka.
Uyaziwa ngokuqhelekileyo ukususa ijezi yakhe ukuze amtyhile "NdingokaYesu T-shirt. U-Kaka uye wabandakanyeka ngokukhawuleza kwimithandazo emva komlozo wokugqibela wemidlalo. Oku wakwenza emva kweNdebe yeHlabathi ye-2002 eBrazil, KaMilan 2004 Scudetto kunye ne-2007 Champions League ukunqoba.
Ngethuba lokugubha emva komdlalo emva kwe-Brazil 4-1 ukunqoba kwi-Argentina I-2005 Cup Confederations Cup ekugqibeleni, yena kunye neqela labalingane bakhe babembathisa i-T-shirts ezifunde "UYesu Uyakuthanda" ngeelwimi ezahlukeneyo.
Ngethuba efumana i-World Cuper ye-FIFA ye-World Cuper kwi-2007, wathi xa esemncinane wayefuna ukuba ngumdlali oqeqeshiweyo waseSão Paulo aze adlale umdlalo omnye Brazil iqela likazwelonke, kodwa oko "UThixo wamnika ngaphezu kokukhe wacela."
Kuze kube ngumhla, uhlobo lwe-Kaká lomculo oluthandayo luvangeli kwaye incwadi yakhe ayithandayo nayo ihlala iBhayibhile. Ngendlebe nodliwano - ndlebe kunye Brazilian kumabonakude O Globo, UKaka wabonisa intando yokuba ngumfundisi wevangeli emva komhlalaphantsi.
I-Ricardo Kaka Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts -Oko akhunjulwayo
Ngenxa yokuphambuka kwayo.
Ngenxa yokulimala, wahlupheka kwi-Real Madrid.
Ukukhawuleza, ukomelele, ugugile kwaye usebenza nzima.
Ukuze ube ngumdlali weqela lokudala ngezinga eliphezulu, inyawo ezintle, kunye nokulinganisela okukhulu.
Ngenxa yokukwazi ukukhupha abaxhasi bexesha elidlulileyo.
Ukuze ube yinkokeli yokuphikisana nokudala amathuba.
Ukuze ube nesigwebo esifanelekileyo.
Ukuze ube nendima ebanzi emidlalweni yomdlali.
Silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ubona into engabonakali kakuhle kweli nqaku, nceda ubeke izimvo zakho Qhagamshelana nathi!
I-Diego Maradona Ibali loBantwana kunye ne-Untold Biography Facts